အရေပြားပြဿနာတွေထဲကနေ, alas, အဘယ်သူမျှမကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ မှိုနှင့်ဘက်တီးရီးယားလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အပါအဝင်နီးပါးနေရာတိုင်းနေထိုင်ကြသည်။ စရိတ်ပမာဏသာရှိဖြစ်ခြင်း, သူတို့ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်တာရှိုးပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှု, နာမကျန်း, overexertion: ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တက်ကြွမျိုးပွားဖို့အတွက်အထောက်အကူမှကွဲပြားခြားနားသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဂျယ်လ် Ch'ing - ထိရောက်စွာအမျိုးမျိုးသောအရေပြားပြဿနာများနှင့်အတူတိုက်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
တစ်ဦးမုန့်-ဂျယ် Ch'ing အသုံးပြုမှုများအတွက်လက္ခဏာများ
Ch'ing - အသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်သင့်လျော်သောသောခေတ်သစ် tool ကို, အရေပြားရောဂါများကိုခံစားနေရပြီး။ မုန့်-ဂျယ် Ch'ing - ထူးခြားတဲ့ Anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ကောင်းတစ်ဦးပိုးသတ်ဆေး။ ကြောင့်အပျော့စားများနှင့်ထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ, ဒီ tool ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်မျက်နှာအဘို့သင့်လျော်သည်။ Tsinovita အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါအဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ။
ဂျယ်လ် Ch'ing လည်းနာကျင်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်အနာ၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာမြှင့်တင်ရန်, ကွဲပြားခြားနားသောဇာစ်မြစ်၏မီးလောင်ဒဏ်ရာများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကူညီပေးသည်။ Ch'ing အင်းဆက်ပိုးမွှားကိုက်အောက်ပါရောင်ရမ်းခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်အုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဂျယ်ရစေရန်ပြုမူ, အရေပြားခန်းခြောက်မထားဘူး။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာယင်း၏အသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ကုသပြီးနောက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ရေချိုးခန်းဂျယ် Ch'ing အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်နည်းလမ်းများ
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Tsinovita အများအပြားဆန့်ကျင်ဖန်းဂတ်စ်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါရှိသည်။ သူတို့ကထိထိရောကျရောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဘက်တီးရီးယားကိုစစ်တိုက်ခြင်း။ အလွန်မကြာခဏ, အ Ch'ing ဂျယ်လ်တစ်ဦး cleanser ကိုအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒီ tool သာဖြစ်ပါသည်အသားအရေပြဿနာတွေပျောက်စေတော်မူ၏, ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအထူးလိမ်းဆေးနှင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းထက်ပိုကောင်းမုန်း၏အနက်ရောင်အချက်များကိုဖယ်ရှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ။
လွယ်ကူသော Ch'ing ကိုသုံးပါ။ ရန်ပုံငွေများ၏အသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှအမြင့်ဆုံးကအသားအရေနှင့်ပိုပြီးအပေါ်ထားရန်လိုအပ်ခဲ့သည် အဝတ်လျှော်ခြင်းမရှိဘဲ, ကျင်းပရန်မိနစ်။ လူတစ်ဦး Ch'ing အဆိုပါဂျယ်ကုသရန်အသုံးပြုသည်ဆိုပါကအခြားအ cosmetology နည်းလမ်းများနှင့်အတူကပေါင်းစပ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများအတွက်ရေချိုးခန်း ယူ. Tsinovitom အလုံအလောက်မယ့်တစ်ချိန်ကတစ်ပါတ်နှင့်အရင်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ်ကြောင့်ပင်အသားအရေနှင့်အတူပြဿနာများမှမခံစားဘူးသောသူတို့အဖို့အကြံပြုသည်တစ်ဦးကြိုတင်ကာကွယ်အတိုင်းအတာအဖြစ်ဂျယ်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဝက်ခြံများနှင့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဂျယ်လ် Ch'ing blackheads , ကွာခြင်းနှင့်ယားယံဖယ်ရှားပစ်ရ။ ဒါဟာပွဿနာမြားစှာကာကွယ်ပေးသည်ထက်အပျက်သဘောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှအရေပြားကိုလျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်ကိုဆိုလိုသည်။
သူတို့ရဲ့ကလေးတွေတစ်နေ့တာအတွင်းနောက်ဆုံးတော့အိပ်ပျော်သောအခါ, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဘယျသို့ပွု ...
ရစ်ချတ် Armitage နှင့်သူ၏ဇနီး
ရောင်ရမ်းမျက်နှာ - အကြောင်းတရားများ
"Pretty Woman" ဂျူလီယာရောဘတ်တစ်ဦးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှသေဆုံးနိုင်!
မျက်နှာစာများအတွက် artificial သောကျောက်
Chiffon အင်္ကျီ 2014
စကော့တလန်စကတ် - နာမတော်ကိုအမှီ ပြု.